ဥပဒေများ စိစစ်ရေးဦးစီးဌာန | Union Attorney General’s Office Skip to main content
EnglishMyanmar Search form
Search You are hereHome » ဖွဲ့စည်းပုံ
ဥပဒေများစိစစ်အကြံဥာဏ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး တွင် ဥပဒေများ စိစစ်ရေးဦးစီးဌာနကို အောက်ပါဌာနခွဲများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည် -
(က) ဥပဒေများ စိစစ်အကြံပြုရေးဌာနခွဲ
(ခ) နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ စိစစ်အကြံပြုရေး ဌာနခွဲ
ဥပဒေများ စိစစ်အကြံပြုရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသည် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေ မပြဋ္ဌာန်းမီက ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ရှေ့နေချုပ်ဥပဒေနှင့်အညီ ဥပဒေများ စိစစ်ခြင်း၊ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ (ည) တွင် ဥပဒေများ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းကိုသာ သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး ဥပဒေများရေးဆွဲခြင်းနှင့် စိစစ်ခြင်းတို့ကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိပါ။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စု အဆင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုခု သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင်စီကဖြစ်စေ ဥပဒေ အကြံဥာဏ် တောင်းခံလာလျှင် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ (ဂ) အရ ဥပဒေ အကြံဥာဏ်ပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
ဥပဒေများ စိစစ်အကြံပြုရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
​ဥ​ပ​ဒေ​များ​ စိ​စစ်​အ​ကြံ​ပြု​ရေး​ဌာ​န​ခွဲ​သည် ​ဥ​ပ​ဒေ​ဆိုင်​ရာ​ကိ​စ္စ​ရပ်​များ​နှင့် ​စပ်​လျဉ်း​၍ ​အောက်​ပါ​တာ​ဝန်​များ​ကို ​ဆောင်​ရွက်​ ရ​ပါ​သည်-
(​က) ​ဝန်​ကြီး​ဌာ​န၊ ​အ​ဖွဲ့​အ​စည်း​များ​က ​ပေး​ပို့​သော ​ဥ​ပ​ဒေ(​မူ​ကြမ်း) ​များ​ကို ​စိ​စစ်​အ​ကြံ​ပြု ​ပြန်​ကြား​ခြင်း၊
(​ခ)​ ဝန်​ကြီး​ဌာ​န၊ ​အ​ဖွဲ့​အ​စည်း​များ​က ​ကျင်း​ပ​ပြု​လုပ်​သော ​ဥ​ပ​ဒေ(​မူ​ကြမ်း) ​ရေး​ဆွဲ​ရေး ​အ​စည်း​အ​ဝေး​များ၊ ​ဥ​ပ​ဒေ (​မူ​ကြမ်း)​ နှင့် ​သက်​ဆိုင်​သည့် Workshop ​နှင့် Seminar ​များ ​တက်​ရောက်​ခြင်း၊
(​ဂ)​ လွှတ်​တော် ​ဥ​ပ​ဒေ​ကြမ်း​ကော်​မ​တီ​က ​ဥ​ပ​ဒေ​ပြု​ရေး​ဆိုင်​ရာ ​ပူး​ပေါင်း​ဆောင်​ရွက်​ရေး ​လုပ်​ငန်း​ကော်​မ​တီ​ အ​နေ​ဖြင့် ​ ဖိတ်​ကြား​လျှင် ​တက်​ရောက် ​ဆွေး​နွေး​ခြင်း၊
(​ဃ) ​ပြည်​ထောင်​စု​ဝန်​ကြီး၊ ​သ​မ္မ​တ​ရုံး​ဝန်​ကြီး​ဌာ​န ​ဦး​ဆောင်​သည့်​ လုံ​ခြုံ​ရေး၊ ​တည်​ငြိမ်​အေး​ချမ်း​ရေး​နှင့် တ​ရား​ ဥ​ပ​ဒေ ​စိုး​မိုး​ရေး​ကော်​မ​တီ​တွင် ​အ​ဖွဲ့​ဝင်အ​ဖြစ် ​ပါ​ဝင်​သည့် ​ပြည်​ထောင်​စု​ရှေ့​နေ​ချုပ်​က ​ဥ​ပ​ဒေ​ရေး​ရာကိ​စ္စ​ရပ်​များ ​ ဆွေး​နွေး​နိုင်​ရန် ​အ​ထောက်​အ​ကူ​ပေး​ခြင်း၊
(​င) ​ဖွဲ့​စည်း​ပုံ​အ​ခြေ​ခံ​ဥ​ပ​ဒေ ​ပုဒ်​မ ၁၀၅ ​သို့​မ​ဟုတ် ၁၀၆ ​အ​ရ ​နိုင်​ငံ​တော်​သ​မ္မ​တ​က ​ဥ​ပ​ဒေ​ကြမ်း​ကို ​လက်​မှတ်​ရေး​ထိုး​ ထုတ်​ပြန်​ခြင်း​မ​ပြု​မီ ​ အ​ကြံ​ပြု​ချက်​တောင်း​ခံ ​သည့် ​အ​ခါ ​ဥ​ပ​ဒေ​ရေး​ရာ ​အ​ကြံ​ပြု​ချက်​နှင့် ​သုံး​သပ်​ချက် ​ပေး​ပို့​ခြင်း၊
(​စ) ​ဥ​ပ​ဒေ​များ​စိ​စစ်​အ​ကြံ​ပြု​ရေး​ဆိုင်​ရာ​ စွမ်း​ဆောင်​ရည်​မြှင့်​ သင်​တန်း​များ​ပေး​ခြင်း၊
(​ဆ) ​ဝန်​ကြီး​ဌာ​န​နှင့်​အ​ဖွဲ့​အ​စည်း​များ​က ​ယင်း​တို့​၏ ​ဆောင်​ရွက်​ချက်​များ​သည် ​ဥ​ပ​ဒေ​နှင့် ​ညီ​ညွတ်​ခြင်း ​ရှိ ​မ​ရှိ ​ စိ​စစ်​ပေး​ရန် ​အ​ကြံ​ပြု​ချက် ​တောင်း​ခံ​သည့်​အ​ခါ ​စိ​စစ်​အ​ကြံ​ပြု​ခြင်း၊
(​ဇ) ​ပြည်​ထောင်​စု​ရှေ့​နေ​ချုပ်၊ ​ဒု​တိ​ယ​ရှေ့​နေ​ချုပ်​တို့​က ​ပေး​အပ်​သော ​လုပ်​ငန်း ​တာ​ဝန်​များ​ကို ​ဆောင်​ရွက်​ခြင်း။
နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ စိစစ်အကြံပြုရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ စိစစ်အကြံပြုရေးဌာနခွဲသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးနှင့် ၀န်ကြီးဌာန ၃၆ ခု အပြင် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးတို့မှ ပေးပို့လာသော ကိစ္စရပ်များအတွက် အောက်ပါတာဝန်များကို ဆောက်ရွက်ရပါသည် -
(က) နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (မူကြမ်း)အား စိစစ်အကြံပြု ပြန်ကြား ပေးခြင်း၊
(ခ) နိုင်ငံတော်မူဝါဒအရ အခါအားလျော်စွာ ဖွဲ့စည်းသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သဘောထားမှတ်ချက်များကို စိစစ်အကြံပြုပြန်ကြား ပေးခြင်း၊
(ဂ) နည်းဥပဒေများ (မူကြမ်း) ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီများတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်း ထားသောကြောင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ နည်းဥပဒေများ (မူကြမ်း) ရေးဆွဲသည့် အစည်းအဝေးများ၊ Workshop နှင့် Seminar များသို့ တက်ရောက်ရခြင်း၊
(ဃ) လွှတ်တော်၏ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ရခြင်း၊
(င) ပြင်ပနိုင်ငံများမှ ပညာရှင်များပို့ချသည့် ဥပဒေရေးဆွဲရေးသင်တန်းများ၊ အခြားဘာသာရပ် ဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ အစည်းအဝေးများ၊ Workshop နှင့် Seminar များသို့ တက်ရောက်ရခြင်း၊
(စ) ပြင်ပနိုင်ငံများတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများ၊ ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများ၊ Workshop နှင့် Seminar များသို့ တက်ရောက်ရခြင်း၊
(ဆ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ဒုတိယရှေ့နေချုပ်တို့က ပေးအပ်သော တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊
မြန်မာစာသည် ရုံးသုံးစာဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဥပဒေများကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းပြီး မြန်မာစာမူ သည်သာ မူရင်း (original)၊ မူမှန် (authentic) ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာ နိုင်ငံတွင်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်သွယ်၍ ဖြစ်စေ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံခြားသားများအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင် နေကြသော နိုင်ငံခြားသား/ ကုမ္မဏီအဖွဲ့အစည်းများအတွက် မြန်မာဘာသာဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းသော ဥပဒေ များအား နားလည်သိရှိစေရန် အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ဥပဒေဘာသာပြန်ဌာနခွဲက ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
ဥပဒေဘာသာပြန်ဌာနခွဲသည် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး နည်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပဒေများကဲ့သို့သော သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သောအမိန့်များ၊ ကြေညာချက်များ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို မြန်မာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းကို စိစစ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံလာသည့်အခါ ဥပဒေဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းများမှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိကို စိစစ်ပြန်ကြားပေးပါသည်။
ထို့အပြင် ဥပဒေဘာသာပြန်ဌာနခွဲသည် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက မြန်မာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ် ဘာသာသို့လည်းကောင်း၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ လည်းကောင်း ဘာသာပြန်ဆိုထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများအပြင် ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခုနှင့်ဖြစ်စေ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနှင့် ဖြစ်စေချုပ်ဆိုမည့် သဘောတူ စာချုပ်များကို စိစစ်ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံလာသည့်အခါ ဥပဒေဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းများ မှန်ကန်မှု ရှိ/ မရှိကို စိစစ်ပြန်ကြား ပေးပါသည်။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့် ယင်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ၏ အခွင့်အရေးများ ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း (International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers and Member of Their Families)၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် အခြားရက်စက်သည့် လူသားမဆန်သော (သို့မဟုတ်) လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ငြိုးနွမ်းစေသော ပြုမူဆက်ဆံမှု (သို့မဟုတ်) ပြစ်ဒဏ်ပေးမှုကို ဆန့်ကျင်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ်၊ ကုန်သွယ်မှု ကိုယ်စားလှယ်ရုံး တည်ထောင်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်၊ နှစ်နိုင်ငံလေကြောင်းသဘောတူစာချုပ်၊ အာဆီယံနိုင်ငံအချင်းချင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေး မူဘောင်သဘောတူစာချုပ်၊ နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ (MoU)၊ တည်ဆောက်-လုပ်ကိုင်-လွှဲပြောင်းပဋိညာဉ် စာချုပ်များ (B.O.T)၊ ဆွေးနွေးမှုမှတ်တမ်းများ (R.O.D) အစရှိသည့် သဘောတူ စာချုပ်များပါ ဥပဒေဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများအား မှန်ကန်မှုရှိ/ မရှိစိစစ်ပြန်ကြားပေးပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးမှ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ကြီးများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များတို့က ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ထံ လာရောက်ဂါဝရပြုတွေ့ဆုံသည့် သတင်းစဉ်များကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် website တွင် လွှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် ဥပဒေဘာသာပြန်ဌာနခွဲက အင်္ဂလိပ် ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုပေးပါသည်။
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ယနေ့တိုင် နှစ်စဉ်ပြဋ္ဌာန်းသော ဥပဒေများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုပြီး ပြန်ဆိုခဲ့သည့် ဥပဒေများအား စုစည်း၍ Myanmar Laws စာအုပ်များ ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ ဥပဒေ ဘာသာပြန် ဌာနခွဲသည် နှစ်စဉ်ပြဋ္ဌာန်းသော ဥပဒေများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ သို့ ဘာသာပြန်ဆိုပြီး Myanmar Laws စာအုပ်များအဖြစ် နှစ်စဉ်ထုတ်ဝေနိုင်ရေးအတွက် နှစ်အလိုက် ပြုစုပြီး စီမံရေးရာဦးစီးဌာနသို့ပေးပို့ပါသည်။
အထက်ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များအပြင် ဥပဒေဘာသာပြန်ဌာနခွဲသည် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး က ဖွင့်လှစ်သည့် ဥပဒေအရာရှိ အဆင့် - ၄ (အစမ်းခန့်) များ လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း၊ မွမ်းမံသင်တန်းနှင့် Legal English သင်တန်းများတွင် Legal English ဘာသာရပ် ပို့ချနိုင်ရေးအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ပြုစုခြင်း၊ သင်တန်းပို့ချခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
​ ဥပဒေဘာသာပြန်ဌာနခွဲသည် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ဒုတိယရှေ့နေချုပ်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များက ပေးအပ်သော အခြားလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် သို့မဟုတ် အမျိုးသား လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးရာ ကိစ္စရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေအကြံဥာဏ်တောင်းခံပါက စိစစ်အကြံပြုခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများတွင် ဥပဒေရေးရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထူးခြားသော အခြေအနေတင်ပြနိုင် ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လွှတ်တော်များတွင် တင်သွင်းသော အဆို သို့မဟုတ် မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြေကြားနိုင်ရန် ပြုစုခြင်းနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဖြေဆိုရမည့် ကိစ္စရပ်များကို ဖြေကြားနိုင်ရန် ပြုစုခြင်း၊ အဆိုနှင့် မေးခွန်းများကို ဖြေကြားရာ၌ ကတိက၀တ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့သို့တင်ပြနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး များက လမ်းညွှန်မှု တောင်းခံလာသော ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လမ်းညွှန်ချက် သို့မဟုတ် ဥပဒေ အကြံပြုချက် ပေးနိုင်ရန် ပြုစုခြင်း၊ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ကိုယ်စား တင်သွင်းလွှာ တင်သွင်းနိုင်ရေးအတွက် အမှုလိုက်ဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာများ စိစစ်ကြားနာရာတွင် ရုံးသဟာရအဖြစ် ဥပဒေအကြံဥာဏ်ပေးခြင်း၊ ရှေ့နေချုပ်က ပေးအပ်သော အခြားတာဝန်မျာကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။
697531Since: 08/01/2013 - 19:50 Copyright © 2013 - 2017 Union Attorney General’s Office. All rights reserved. Powered by : Information Matrix